Mashandisiro emutsetse wepasi pasi muMapeji eMac | Ndinobva mac
Mashandisiro emutsetse wepasi pasi muMapeji eMac
Javier Porcar | | Mac App Store, Tutorials, dzakawanda
Kune vashandisi vachangoburwa paMac, tizivisei kuti timu yedu ine anodiwa ehofisi maturusi ekuita chero basa rekutanga, kunyangwe isu tichigona zvakare kupinda mumabasa akaomarara.
Tiri kutaura nezvekushandisa package, iyo iyo "vanhu vekare venzvimbo" vanoziva seWork. Ndokunge, isu tine Mapeji, Numeri uye Keynote yekuita basa redu. Mapeji iri yakapusa, minimalist izwi processor isina chinhu chekugodora ma greats ari pamusika. Nhasi tichaziva mashandisiro iro repasi repasi, maitiro ekubvisa uye mashandiro naro nekukurumidza kubva kubha yekushandisa kana pfupi keyboard.
Chinhu chekutanga iwe chaunofanira kuita kana usina Mapeji akarodha pasi ndeye kurodha pasi pane iyo Mac App Store peji. Kutevera vhura gwaro kana kunyora imwe (unogona kuendesa izwi refaira)
Zvino, nerubatsiro rwechituko, maka chikamu chaunoda kumaka uye chichava chakasimbiswa mubhuruu.
Tevere, iwe unofanirwa kuenda kubha rekushandisa uye tinya Isa. Imwe yesarudzo dzekupedzisira ndeye Yakasimbiswa. Nekudzvanya pairi, iwo mavara akasarudzwa anozosimbiswa yeyero.
Chokwadi iwe unozofanirwa kuratidza zvimwe zvinyorwa uye kuzviita zvakapusa. Pakati pezvinyorwa uye mabhatani zvinoratidzika comment bar. Iwe uchawana bhatani rinoratidzira. Maka chiratidzo chitsva chemavara senge poindi yechipiri uye pinda Ratidza Mota mubhawa rekutaura. Zviri nyore kudaro, unogona kutara zvese zvikamu zvaunoda.
Nekudaro, isu tinogona nguva dzose kushandisa nzira pfupi yekhibhodi. Isu tinosimbisa iwo mutsara kusimbisa sepanongedzo yechipiri uye tinya inotevera inotevera kiyi yekhibhodi: Shift + Cmd + H. Kana izvi zvaitwa, iwo mavara akanyorwa anosara.
Chekupedzisira, iyo sarudzo inondishamisa ini zvakanyanya pane ese maitiro. Kudzima chinyorwa chakatemerwa chiri nyore sekudzvanya pane iwo iwo mutsara wepasi uye nekudzvanya kudzima pane izvo zvirimo menyu zvinowoneka. Zvakareruka sekudaro.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » dzakawanda » Mashandisiro emutsetse wepasi pasi muMapeji eMac
Carlos Jimenez akadaro
Ndatenda zvikuru nezano iri, rambai makadaro
Pindura kuna Carlos Jimenez
Ungachinja sei ruvara rwezvinyorwa? Kana inongotsigira yero chete? Ndatenda.
Musique mutambi akasiyana weMac yedu